के अभिनेत्री पुजा शर्मा र अभिनेता आकाश श्रेष्ठको सम्बन्ध बिग्रीएकै हो त ? (भिडियो)
के अभिनेत्री पुजा शर्मा र अभिनेता आकाश श्रेष्ठको सम्बन्ध बिग्रीएकै हो त ?
ईटहरी/ नेपाली चलचित्र उधोगमा जोडिको चर्चा खुबै हुने गर्छ । यस्को जोडि यो संग सुहायो, यी २ को क्यामेस्ट्री मिल्यो, यी २ प्रेममा छन जस्ता कुराहरुले सामाजिक संजाल र मिडियामा मुख्य स्थान पाउने गर्छ । तर, जोडि टिकाउ नहुदा फ्यानहरु निरास हुने गर्छन् । पल र आचलको जोडिलाई फ्यानहरुले खुबै रुचाएका थिए । फ्यानहरुले जोडिको ‘आँप’ नामकरण नै गर्दिएका थिए । शर्माको विवाह पश्चात् यो कथा आलोचना र गाली गरागर गर्दै सकियो ।
पछिल्लो केही समय यता आकाश श्रेष्ठ र पुजा शर्माको जोडिले सामाजिक संजाल तातिने गरेको छ । यो जोडिको प्रेमको चर्चा मिडियामा समेत बेलाबखत हुन्छ । तर, हाल सम्म प्रेमबारे बोलेका छैनन् । साथिमात्र बताउने यी २ लाई फ्यानहरुले भने प्रेमजोडिकै रुपमा हेरेका छन् । तर, पछिल्लो केही समय यता पुजा र आकाशको सम्बन्ध चिसिएको गाईगुई चर्चा हुन थालेको छ । हेर्नुस बिस्तृत भिडियो
यी २ का फ्यानहरु अहिले २ धार भएको सामाजिक संजालमा देख्न थालिएको छ । पुजा र आकाशको नाममा फ्यान ग्रुप भन्दै बनाईएका विभिन्न फेसबुक ग्रुपहरुमा सम्बन्ध चिसिएको कुराहरु पोस्ट हुन थालेको छ । यसअर्थमा पनि शर्मा र श्रेष्ठलेको सम्बन्ध बिग्रीएको छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । यता पार्टी, समारोहमा समेतसंगै देखिने यी २ पछिल्लो समय पुजाको जन्मथलो सिन्धुपाल्चोकमा सहयोग गर्न जादा समेत संगै देखिएनन् ।
दुबै जना त्यहा सहयोग लिएर पुगे तर फरकफरक । त्यस्तै पुजा विवादमा फसेको रजतपटको सहयोग अभियानमा आकाश श्रेष्ठको सहकार्यले समेत यी २ बिचको सम्बन्ध राम्रो छैन भन्ने बुझिन्छ । पुजाको सम्बन्ध सोही अन्तरबार्ताबाट प्रकाश सुवेदीसंग बिग्रीएको थियो । यी सब यथार्थमा देखिएका अनुमान र अड्कल हुन् । दुबैले अहिले सम्बन्धको बारेमा केही बोलेका छैनन् । त्यसैले फ्यानहरु पनि अन्योलमा छन् । जे होस् यथार्थ छिट्टै बाहिर आउने प्रतीक्षा गरौ ।